Ejipta: Graffiti – Mba ho Revolisiona Maroloko sy Ho Fahatsiarovana Tsy Maty Vonoina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Avrily 2011 5:37 GMT
Hatrany amin'ny andro voalohan'ny rovolisiona ejiptiana, naka ny fomba fanaon'ny razambeny ireo mpanao hetsi-panoherana amin'ny fomba fandraketana ireo androm-pandresena sy firavoravoana, fandraketana ireo andron'ny revolisiona eny amin'ireo rindrin'ny Kianjan'i Tahrir ao afovoan'i Caire, ivon'ireo fihetsiketsehana. Tonga ny anjarany, maniry toa anana ny graffiti* eraky ny rindrina ao Caire.
Tao amin'ny bilaoginy El Aam Tonsy mitantara ny sary mahazendana momba ireo Farao hita eny amin'ny rindrin'ireo tempoly:
Ganzeer mamoaka ny asa mahaliana vita amin'ny rindrin'i Tarek Abdel Latif ao Zamalek:
Nitohy ilay fandraisan'andraikitra mendrika, mba ho fandraisana anjara amin'ny fanomezam-bohinahitra ireo maritiora samihafa nanerana ireo distrika rehetra tao Ejipta. Indrisy, indray maraina Ganzeer nifoha maraina ary nahita fa ny iray tamin'ireo sary an-drindrin'ny Maritiora dia nofafana.
Niantso fihaonana savaranonando izy ny Zoma 29 -aprily ho fampitaovana ny Mad Graffiti Weekend. Ny tanjon'ny fihaonana dia ireto: